२०७७ मङ्सिर १९ शुक्रबार ०२:०५:००
कृष्णकुमार श्रेष्ठ, सांसद, तनहुँ– १
यो ठूलो विषय नै होइन, यसलाई ठूलो विषय बनाइएको हो । अहिले जसरी कृष्णकुमार श्रेष्ठले उद्घाटन गर्न चाहेका थिए, रामचन्द्र पौडेलले गरेर अवरोध भयो भन्ने जुन कुरा आएको छ, यो सरासर झुटो हो । म त्यो पुल उद्घाटन गर्न लालायित थिइनँ, छैन । मेरो कुरा के मात्र हो भने जुन सरकारी निकायले पुल निर्माण गऱ्याे, उसको स्वीकृति नै नलिई कसरी पुल उद्घाटन हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो ।
पुलको उद्घाटन त म पनि रामचन्द्र पौडेलबाटै गराउन सक्थेँ । त्यसमा कुनै समस्या नै छैन । तर, उहाँले अहिले जसरी मैले प्रजातन्त्र ल्याएको, मैले संविधान बनाएको, मैले लोकतन्त्र ल्याएको भनेर घमण्ड गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा मात्रै मेरो भनाइ हो । बजेट जसको पालामा हालेको भए पनि उद्घाटन त जसको सरकार छ, उसले नै गर्छ होला नि !
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बजेट त किसुनजीले छुट्याएर थाल्नुभएको हो, तर अब उद्घाटन गर्ने वेला आउँदै छ, अब के हामी किसुनजीलाई खोज्न जाने हो त ? जसको सरकार छ, उसैले गर्ने होला नि त !